Wholesale sy fanadiovan-drivotra fanadiovan-drivotra fanodinana rivotra kejia
Fanadiovan-drivotra HEPA cartridge: tena sivana HEPA H13 no misambotra 99,97% ny loto amin'ny rivotra; ny setroka, ny vovobony, ny vovoka, ny biby mandro, ny bobongolo, ny fofona ary ny allergen hafa dia kely hatrany amin'ny 2,5 micron. Ankafizo ny rivotra madio sy azo antoka ao an-trano na any amin'ny birao ary ataovy izay hahavelom-bolo anao.
Ilaina tokoa ity karazana sivana ity ho an'ireo marary mahazaka aretina: manampy amin'ny fanivanana mahomby ny fahasosorana ao anaty rivotra, toy ny setroka, vovobony, sns. Vovoka, spores bobongolo, dand biby sy fibre lamba. Hatsarao tsara ny kalitaon'ny rivotra anaty.
Fitaovana sivana: karbaona entina PP na PP +
Loko: loko fotsy, maitso na voatondro ho an'ny mpanjifa
Fitaovana ambony sy ambany: fonony na plastika
Ny haben'ny vokatra dia azo namboarina
Masinina rehetra: ny fanoloana sivana dia singa mitambatra, ao anatin'izany ny sivana mesh, sivana H13 HEPA ary karbaona mihetsika ao anaty masinina iray.
Mora diovina: ho an'ny vokatra tsara indrindra, esory indray mandeha isam-bolana ny sivana ary diovy amin'ny borosy malefaka na fanadiovan-drivotra kely. Aza mando ny sivana!
Mora soloina: akatona ary esory ny fitaovana. Apetraho ambony ambany ilay mpanadio amin'ny tany malalaka malalaka sy tsy misy mangirana. Atodiho amin'ny lafiny iray ny sivana mba hanesorana azy. Esory ny fonosana amin'ny sivana fanoloana ary ampidiro ao amin'ny fototr'ilay fanadiovana izy io. Ahodino ny sivana amin'ny famantaranandro mba hiarovana. Avadiho mitsangana ilay fitaovana, ampidiro ary ampodio. Tsindrio ary tazomy ny bokotra jiro sivana reset raha tsy maty ny jiro.
Azafady, ovay tsy tapaka ny sivana mba hitazomana ny masinina ho madio sy hadio. Aza manasa.
Ny vokatra dia azo ampiasaina amin'ny sehatry ny fitsaboana, indostrialy ary sehatra hafa.
Teo aloha: Sivana avo lenta avo lenta
Manaraka: Tanan-drano sivana avo lenta sivana